कुवेतमा नेपाली कामदारकाे मृत्युप्रति मानव अधिकार आयोगद्वारा सरकारको ध्यानकर्षण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कुवेतमा नेपाली कामदारकाे मृत्युप्रति मानव अधिकार आयोगद्वारा सरकारको ध्यानकर्षण
फाल्गुन २, २०७६ हाेम कार्की
काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको मानवअधिकारको रक्षा र सुरक्षामा गम्भीर हुन सरकारलाई शुक्रवार आग्रह गरेको छ ।
वालुवा–ढुंगाबाट पुरिएर कुवेतमा ६ नेपाली कामदारको मृत्यु भएको घटना सार्वजनिक भएपछि आयोगले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्रचार गरी नेपाली कामदारप्रति सुरक्षाको बिषयमा दीर्घकालिन नीति लिन अनुरोध गरेको हो ।
‘कुवेतको घटनाले हामीलाई निकै दुखित वनाएको छ,’ आयुक्त सुदिप पाठकले भने, ‘हामीले सरकारलाई विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारको उचित सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेका छौं ।’ कुवेतमा पाइप विछ्याउनको लागि भुई सम्याइरहेको बेला एक्कासी बालुवा ढुंगा झर्दा बुधवार ६ जना नेपालीको ज्यान गएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । दुई जना घाइते भएका छन् ।
आयोगले नेपाली दूतावासलाई सर्म्पक गरी घटनाको वास्तविकता पठाउन आग्रह गरेको छ । घटनामा परेर पाल्पाका एकबहादुर गाहा, सिराहाका गंगाराम चौधरी, ताप्लेजुङका वसन्त गुरुङ, दाङका श्यामनारायण चौधरीको मृत्यु भएको थियो । थप दुई जना मृतकको पहिचान भएको छैन ।
‘मृतकका परिवार र घाइतेलाई उचित क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउने ब्यबस्था मिलाउन दूतावासलाई अनुरोध गरिएको छ,’ उनले भने, ‘घाइतेहरुको निशुल्क उपचार हुनुपर्छ ।’
प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ १७:४०
त्यो भ्यालेन्टाइन्स : श्वेता खड्का
काठमाडौँ — अभिनेत्री श्वेता खड्का पछिल्लो समय व्यापारमै सक्रिय छिन् । व्यापारबाट अभिनयको लागि समय निकाल्न उनलाई गाह्रो परिरहेको छ । तर अहिले उनी व्यापार बिस्तारमै लागेकी छिन् । उनी अभिनित पछिल्लो फिल्म 'कान्छी' हो । श्वेतासँग गरिएको भ्यालेन्टाइन्स संवाद :
यो भ्यालेन्टाइन्स डेमा के छ त योजना ?
कार्यक्रम छ । त्यसैमा व्यस्त हुन्छु ।
कुन 'भ्यालेन्टाइन्स डे' मिस हुन्छ ?
'भ्यालेन्टाइन्स डे' माया गर्नेहरुले आफ्ना मायाले मिस गर्ने दिन हो जस्तो लाग्छ । अँ, मलाई याद छ म टिनएज हुँदा विद्यालयमा कार्ड र फूल आदान प्रदान हुन्थ्यो । मलाई मनपराउनेहरुले गुलाब नै दिन्थे । त्योबेलाको साथीसँग यो दिन मनाएको धेरै याद आउँछ ।
त्योबेला त धेरैले प्रेम प्रस्ताव राखे होला ?
'ओ माइ गड' (हाँस्दै) । धेरैजनाको प्रस्ताव आउँथ्यो । नक्कली गुलाब, कार्ड अनि उपहार दिने साथिहरु त धेरै थिए नि । प्रेम प्रस्तावका लागि भ्यालेन्टाइन्स डे नै कुर्नुपर्दैन जस्तो लाग्छ । अहिले पनि फ्यानहरुले फूलहरु पठाउनुहुन्छ । म चाहीँ कसैसँग प्रेममा छैन । तर म सबैलाई प्रेम गर्छु ।
कतिको विशेष लाग्छ त यो दिन ?
कुनै पनि पर्व नभएको भन्दा राम्रो । एउटा विशेष दिनमा आफूले मन पराएको मानिससँग समय बिताउनु एकदम राम्रो लाग्छ । यो पर्वलाई लिएर म एकदमै सकरात्मक छु ।
कुनै विशेष याद छ यो दिनसँग ?
यादहरु त धेरै छन् तर सेयर गर्न मिल्दैन (खित्का छोडेर) । त्यही हो त्योबेला हाम्रो साथीहरुको समूह हुन्थ्यो । खुब रमाइलो हुन्थ्यो । त्यो क्षण याद आउँछ ।
स्वर्गिय कलाकार/पति श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग भ्यालेन्टाइन्स मनाइयो होला नि ?
हामीले भ्यालेन्टाइन्स डे कहिल्यै पनि मनाइनौं । उहाँसँग मेरो अभिभावक, शुभेच्छुक अनि मित्रको सम्बन्ध थियो । बिहे भयो । त्यस्तो केही थिएन ।
'भ्यालेन्टाइन्स' छैन कोही ?
मेरो शुभचिन्तकले त सँधै मलाई पनि माया गर्ने व्यक्ति आइदिओस् । मुभ अन होस् भन्ने इच्छा व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
आफैलाई चाहीँ कतिको लाग्छ अब 'मुभअन' हुनुपर्छ भन्ने ?
म यही भन्न सक्दिन भविष्यमा के हुन्छ । म आजसम्म रमाएर बाँचिरहेको छु । मैले रमाउने कुरामा केही पनि छोडेको छैनजस्तो लाग्छ । आफ्नो जिन्दगी रमाइलोसँग नै जिइरहेको छु । र, सुभचिन्तकको इच्छालाई मैले सकरात्मक रुपमा लिएको छु । यो उहाँहरुको मप्रति चिन्ता हो । हाम्रो योजना हाम्रो हातमा हुँदैन ।
कतिको याद आउँछ यस्तो विशेष दिनमा ?
म जहिल्यै मिस गर्छु । कुनै पर्व आउनु पर्दैन उहाँलाई सम्झन । मैले बिर्सेकै छैन त नसम्झने कुरा हुँदैन । म हरेक बिहान उहाँलाई धुप बालेर ढोग्ने गर्छु । यो मैले गर्ने सम्झना हो । भगवानको रुपमा लिन्छु उहाँलाई । उहाँको तस्बिर भगवानसँगै राखेको छु । उहाँलाई सम्झन भ्यालेन्टाइन्स डे आउनु पर्दैन ।
भनेपछि हरेक बिहान भ्यालेन्टाइन्स डे ?
हो नि ।
प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ १७:३५